Iindaba -I-oda yokuLungisa eBelated yokuKhanya okuSebenzayo
Umyalelo woLungiso oBhalisiweyo weSibane esiSebenzayo
Xa abathengi bamanye amazwe besithi andikaze ndithenge ukukhanya kwakho kokusebenza, ngaba umgangatho wayo unokuthenjwa? Okanye ukude kakhulu kum. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho ingxaki esemgangathweni?
Zonke iintengiso, ngeli xesha, ziya kukuxelela ukuba iimveliso zethu zezona zibalaseleyo. Kodwa ngaba uyakholelwa ngokwenene?
Njengomenzi wobuchwephesha wokukhanya okusebenzayo okubandakanyeke ngokunzulu kumzi mveliso wezonyango iminyaka engama-20, sinokukuxelela ngedatha enkulu yokudumisa umsebenzisi ekhaya nakumazwe aphesheya, nceda usithembe.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, sifumene i-imeyile evela kumthengi. Umthengi uthenge ukukhanya kokusebenza kwe-LED ngo-2013. Ukusukela ngoko, akuzange kubekho sicelo solungiso.
Nangona kunjalo, ngenxa yobomi benkonzo yebhodi ye-PCB ngenene isondela kumda wayo, bagqiba kwelokuba basibhalele izinto ezintsha zokuzilungisa.
Ukususela ngo-2013 ukuya ku-2020, besilinde le oda yokulungisa iminyaka esi-7.
Siyavuya ukufumana le imeyile. Kwixesha elidlulileyo, besihlala ngqo emgceni esemgangathweni kwaye sizabalazela ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Sihlala sihlaziya ubume bemveliso kunye noyilo ngaphandle kokuzibandakanya kwiimfazwe zamaxabiso. Kule mihla, iimveliso zethu bezisetyenziswa ngabathengi iminyaka emininzi. Ngoku abathengi basathenga izixhobo kwaye baqhubeke nokuzisebenzisa. Kwanele ukubona ukuba ukuzingisa kwethu kunentsingiselo kakhulu.
E-China, sinabathengi abaninzi abathembela kumgangatho wethu kakhulu. Emva kokukhanya kwethu kokusebenza kukwaluphala, xa uthenga ukukhanya okutsha kokusebenza, basabeka phambili uphawu lwethu. Okanye, xa isibhedlele esidala sifudukela kwindawo entsha, basasicela ukuba sibancede basuse isibane esidala kwaye basibuyisele kwisibhedlele esitsha.
Sinombulelo ngenkxaso eyomeleleyo yaba basebenzisi, kwaye ngokuqinisekileyo siya kuwugcina umoya wokuthobeka, simamele ngononophelo kwiimfuno zabathengi, siqhubeke nokuphucula iimveliso, kwaye sihambisane namaxesha.